Rikooo sika aircrafts kungekho imisebenzi e prepar 3d v4
Umbuzo Rikooo sika aircrafts kungekho imisebenzi e prepar 3d v4
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #643 by Brunoeduardo
Ezinye izindaba ukuba inguqulo entsha ye prepar 3d v4?
iminyaka 2 5 izinyanga ezedlule #663 by khamuluka
Isihloko esikhulu asilungile, sibukeka njengazo zonke iRikoo FSX izindiza azisebenzi:
URikoo akayena umqambi oyisisekelo wama-addons. Abaningi FSX Izindiza ze-NATIVE zisebenza ngaphakathi P3D I-V4, kungaba yangempela noma mod modered nguRikoo. Kepha i-FS9 izindiza ezifakiwe ayisebenzi.
iminyaka 2 4 izinyanga ezedlule #667 by Macca22au
Guys, bambalwa kakhulu noma cha FSX noma i-FS2004 indiza izosebenza P3Dv4.
Iningi P3d izindiza ze-v3, izindiza eziyinkimbinkimbi ikakhulukazi ezine-FMC azisebenzi P3D4
Ukwakhiwa kwe-64bit kwe P3DI-4, isho ukuthi izindiza ezithile, izindawo ezinhle njll. Zizodinga ushintsho oluthile ukuze luhambisane.
Ngikhuthaza ababhali bokulanda okuningi lapha ukuthi basebenze ukubuyekeza ama-add-add abo.
unyaka 1 9 edlule #946 by DRCW
Akekho noChris Evens oke wakuthola konke okwenziwayo futhi angazi uma ededela indiza athi isebenza kuV4. Ukuqonda lokho, kufanele uvumele ukuthi lezi zinambuzane zisebenze, ngamunye ngamunye. Ezinye izindiza zizosebenza ngenkathi ezinye zingasebenzi, kulula lokho. Khipha noma yini engasebenzi futhi edala ukushayeka. Linda kancane, ufunde izinkundla, bese ubhekela labo abanikezela izimpilo zabo ku-freeware, lungisa izimbungulu. Iningi lalawa maphutha asezinguquko zekhodi eziguqukayo P3D kusuka ku-32 bit kuya ku-64. Ekugcineni kuzobe kukufanele. Sure beats FSW ... Amafayili wescenery abonakala ngathi wonke asebenza kuwo P3D v4. Ngikwazi ukulanda konke ukubuka kwami ​​isithombe. Lokho kungenxa yamafayela ebuka indawo awasho lutho ukwedlula ukwakheka ngenkathi izindiza zibandakanyeka kakhulu ekusebenzeni nakwindlela.
Isikhathi ukudala page: 0.183 imizuzwana